Eksaody 14: 15-31,15 - Ny Baiboly
Eksaody toko 14, 15-31,15
<15Ary hoy Iaveh tamin'i Moizy: Nahoana no mitaraina amiko hianao? Ilazao ny zanak'Israely mba hiainga. 16Hianao manaingà ny tehinao sy maninjira ny tànanao eo ambonin'ny ranomasina dia hampisaraka roa azy; ary ny zanak'Israely kosa hamaky eo afovoany mandia tany maina, 17ary izaho hanamafy ny fon'ny Ejipsiana hanarahany azy ireo avy ao aoriana, ary hataoko miharihary ny voninahitro ao amin'i Faraona sy ny tafiny rehetra, mbamin'ny kalesiny amam-pitaingin-tsoavaliny. 18Ka ho fantatry ny Ejipsiana fa Iaveh aho, rahefa hanehoako ny voninahitro Faraona sy ny kalesy amam-pitaingin-tsoavaliny.